क्यासिनोलाई व्यवस्थित गर्न समिति | गृहपृष्ठ
Home बजार क्यासिनोलाई व्यवस्थित गर्न समिति
क्यासिनोलाई व्यवस्थित गर्न समिति
फागुन २२, काठमाडौं (अस)। क्यासिनोलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि क्यासिनो नेपालका मजदूर सङ्गठन र व्यवस्थापनबीच एक वर्किङ कमिटी बनाउने सहमति भएको छ । व्यवस्थापन र मजदूर सङ्गठनबीच आइतवार भएको सहमतिअनुसार कमिटीले मजदूरले तीन महीनादेखि नपाएको तलबलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी काम गर्ने नेपाल पर्यटन होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ श्रमिक सङ्घका सदस्य सूर्य भण्डारीले बताए । कमिटीले क्यासिनोलाई व्यवस्थित र मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्ने, विदेशी पर्यटकलाई दिइने मनोरञ्जनात्मक सेवालाई व्यवस्थित बनाउनेलगायत विषयमा काम गर्नेछ ।
नेपाल रिक्रियशन सेण्टर (एनआरसी) ले सञ्चालन गरेका एभरेष्ट र तारा क्यासिनोलाई क्यासिनो नेपालका कर्मचारीले पाउन बाँकीमध्ये एक महीनाको तलब दिन आग्रह गर्दा उनीहरूले दिन नचाहेको पनि उनले बताए । उनका अनुसार एनआरसीका सञ्चालक राकेश वादवाले नै सञ्चालन गरेका ती क्यासिनोबाट मजदूरलाई सहयोग पुर्याउन आग्रह गर्दा व्यवस्थापनले चासो नदेखाएको बताएका छन् । मजदूरले एनआरसीबाट सञ्चालन भएका एक क्यासिनो नाफामा जाँदा घाटामा गएर तलब नै नपाएका मजदूरलाई ती क्यासिनोले हेर्नुपर्ने माग गरेका थिए । क्यासिनो नेपाललाई सञ्चालकले नै वास्ता नगरेको तथा अन्य क्यासिनोको सहयोग माग्दासमेत सहयोग नपाइएकोले आफूहरू चेपुवामा परेको त्यहाँका मजदूरहरूले बताएका छन् । क्यासिनो नेपालका मजदूरहरू सञ्चालकलाई भेट्न भारत जाँदा नेपाल आउने वातावरण नभएकाले वातावरण बनाइदिन वादवाले भनेको पनि भण्डारीले बताएका छन् ।
क्यासिनो नेपालमा कार्यरत अखिल नेपाल होटल तथा रेष्टुराँ मजदूर सङ्घ, श्रमिक सङ्घ, नेपाल स्वतन्त्र होटल क्यासिनो तथा रेष्टुराँ मजदुर युनियन र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक पर्यटन होटल मजदूर सङ्घले आधिकारिक रूपमा संयुक्त समिति बनाएर व्यवस्थापनसँग सहकार्य गरी काम गर्न लागेकोसमेत भण्डारीले जानकारी दिए । चारओटै समितिबाट ३/३ जना रहने गरी एक संयुक्त कमिटी बनाइएको छ ।
क्यासिनोलाई बन्द गरेर राजस्व नउठ्ने भएकाले क्यासिनो नियमावलीले नै निर्धारण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय सदस्य कृष्ण पाण्डेले अभियानलाई बताए । उनका अनुसार मजदूरको समस्यालाई ध्यानमा राखेर क्यासिनो सञ्चालनको नियम बनाउन आवश्यक छ । रोयल्टी नतिर्ने निहुँमा क्यासिनो बन्द गरेर मजदुरको रोजीरोटी खोसिनुभएन र मजदूरले नियमित रूपमा तलब पाउनुपर्ने वातावरणको समेत सृजना गरिनुपर्छ, उनले भने ।
डिजिटल प्रविधिमा आधारित ई-पोष्टरको शुरुआत
फागुन २२, काठमाडौं (अस)। मिडिया स्पेस सोलुशन प्रालिले विज्ञापनको नयाँ माध्यमका रूपमा डिजिटल प्रविधिमा आधारितई-पोष्टरको शुरुआत गरेको छ । आइतवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी कम्पनीले प्रविधिको शुरुआत गरिएको जानकारी दिएको हो । कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक जीपी आधिकारीले ई-पोम प्रविधिको माध्यमबाट विज्ञापन गर्दा सजिलो हुनुका साथै सस्तो पर्ने बताए ।
कम्पनीले यो प्रविधिलाई ई-पोम (इलेक्ट्रोनिक प्वाइण्ट अफ परचेज मिडिया) भनेको छ । कम्पनीले दिएको जानकारीअनुसार यो प्रविधि अहिले राजधानी स्थित भाटभटेनी सुपरमार्केटबाट शुरू गरिएको छ । यसका लागि अहिले ४६ इञ्चका चारओटा र ३२ इञ्चका दुई ओटा डिस्प्ले स्क्रीनको व्यवस्था गरिएको छ । यो माध्यमले विज्ञापन गर्नेहरूका लागि नयाँ माध्यम भएको कम्पनीले बताएको छ ।
यी स्क्रीनहरू अमेरिकारको क्यालिफोर्निया स्थित भ्यू सोनिक कम्पनीले उत्पादन गरेको हो । कम्पनीका अनुसार अहिले यो प्रविधिमार्फत ३० ओटा विभिन्न विज्ञापन बज्ने गरेका छन् । विज्ञापन पेनड्राइभबाट पनि बजाउन सकिन्छ ।
संस्थागत सुशासनसम्बन्धी अन्तरक्रिया
फागुन २२, काठमाडौं (अस)। नेशनल बैङ्किङ ट्रेनिङ इन्षिटच्युट (एनबीटीआई) र अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगम (आईएफसी)को आयोजनामा राजधानीमा एकदिने संस्थागत सुशासनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
कार्यक्रममा मुम्बई स्थित आईएफसीका प्रतिनिधि मार्टिन स्तेइण्डला, कुमारी बैङ्कका सीईओ राधेश पन्त तथा वाटर एड नेपालका आशुतोष तिवारीले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा संस्थागत सुशासनका विषयमा छलफल भएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न बैङ्कका ३० प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । आईएफसी नेपालका प्रमुख राजीव गोपालले विभिन्न कार्यक्रमद्वारा नेपालको अर्थतन्त्रलाई आईएफसीले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
एनबीटीआईका सीईओ सञ्जीव सुब्बाले वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ पर्यावरणीय चक्र बनाउनका लागि एनबीटीआई प्रणालीमा भएका प्रत्येक सरोकारवालाहरूको गुणस्तरमा वृद्धि गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए । संस्थागत सुशासनका लागि सञ्चालन गरिएको यो कार्यक्रमले नेपालको वित्तीय क्षेत्रमा राम्रा शुसासनका अभ्यासहरू स्थापना गर्ने उनको भनाइ छ ।
होम स्टेको सम्भावना खोज्दै हिलेखर्कबासी
फागुन २२, तनहुँ (अस) । तनहुँको पर्यटकीय क्षेत्र बन्दीपुर बजारबाट नजिकै रहेको देउराली गाविसको सांस्कृतिक गाउँ हिलेखर्कका बासिन्दा गाउँमा होम स्टेमार्फत पर्यटक भित्र्याउन लागि परेका छन् । महाभारत पर्वतीय श्रृङ्खलाको सबैभन्दा अग्लो टाकुरो छिम्केश्वरी तथा माता छिम्केश्वरीको मन्दिर जाने प्रवेशद्वारका रूपमा रहेको यस गाउँका बासिन्दा अहिले आफ्नो संस्कृति तथा जातीय पहिचानको संरक्षण गरी पर्यटकको चहलपहल बढाउने प्रयत्नमा छन् ।
बन्दीपुर भ्रमणका लागि आउने पर्यटकलाई यसतर्फआकर्षित गर्न गाउँवासीले आफ्नो घरको १ कोठा छुट्टयाएका छन् । पर्यटकहरूका लागि स्थानीय उत्पादनको स्वादका साथै सांस्कृतिक चुड्का, घाँटुलगायत नृत्य देखाउने प्रबन्ध गरिएको स्थानीय अगुवा चन्द्रप्रकाश गुरुङले बताए । केही घरबाट शुरुआत गरिएको यो कार्यक्रमलाई बढाउँदै जाने योजना रहेको उनले बताए । होम स्टे कार्यक्रममा बाहय र आन्तरिक दुवै पर्यटकलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेको उनले जानकारी दिए ।
गाउँवासीले पर्यटकहरूको रुचिलाई ध्यानमा राखी परापूर्वकालदेखि प्रयोगमा आएका सामाग्रीहरूलाई संरक्षण गरी सङ्ग्रहालयसमेत निर्माण गरेका छन् । त्यसैगरी अन्य परम्परागत सांस्कृतिक सम्पदालाई पनि उनीहरूले उत्तिकै प्राथमिकतामा राखी त्यसबारेमा नयाँ पुस्तालाई समेत सिकाएका छन् । होम स्टेमार्फत पर्यटक बढाउने सोच रहेको उल्लेख गर्दै तनहुँ पर्यटन विकास समितिका अध्यक्ष हरिसिंह गुरुङले हिलेखर्कमा होम स्टेको पर्याप्त सम्भाव्यता रहेको बताए ।
बन्दीपुरमा आउने गरेका पर्यटकहरूलाई बसोबास बढाउनका लागि यहाँको गुरुङ समुदायको सांस्कृतिक क्रियाकलापले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने उनको भनाइ छ । उनले बन्दीपुर आएका पर्यटकलाई हिलेखर्क हुँदै छिम्केश्वरी देवीको मन्दिर तथा छिम्केश्वरी डाँडोसम्म पुर्याउन सकिने बताए । तनहुँ जिल्लाभित्रका १० गाउँलाई होम स्टेको सम्भाव्य स्थलका रूपमा पहिचान गरी पूर्वाधार विकासका लागि काम थालेको उनले जानकारी दिए ।
यामाहाको स्थानीय बजार प्रवर्द्धन
नेपालका लागि यामाहा मोटरसाइकलको आधिकारिक विक्रेता मोरङ अटो वर्क्सले नेपाली बजारमा ल्याएको यामाहा वाईबीआर १२५ को स्थानीय तहमा बजार प्रवर्द्धन गर्ने क्रममा शनिवार नारायणगढमा एक कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरूले यामाहा वाईबीआर १२५ मा चढी शहर परिक्रमा गरेका थिए । रोयल सेञ्चुरी होटलबाट शुरू भएको र्यालीले नगरको विभिन्न भाग परिक्रमा गरेको थियो ।
नयाँ वाईबीआर १२५ ‘छरितो’ र आकर्षक भएकाले यसले सबैको चित्त बझाउने विश्वास गरिएको छ । १२३ सीसीको शक्तिशाली इञ्जिन भएको यस मोटरसाइकलमा ४ स्पीड गेयर बक्सको प्रयोग गरिएको छ । यामाहा वाईबीआर १२५ कालो, रातो र रातो-कालो गरी तीन रङमा उपलब्ध छ । यसको ग्राहक मूल्य रू. १ लाख ४९ हजार ९ सय रहेको छ ।
ज्योति विकास बैङ्कको तेस्रो साधारणसभा सम्पन्न भएको छ । शनिवार भएको साधारणसभाले बैङ्कको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा आवश्यक परिमार्जन र संशोधन गर्ने प्रस्ताव सवसम्मतिबाट पारित गरेको छ । बैङ्कले राष्ट्रियस्तरको विकास बैङ्कको रूपमा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट २०६५ असार ३० मा स्वीकृति प्राप्त गरी मिति २०६५ साउन ९ देखि बैङ्किङ कारोबार शुरू गरेको हो । साधारणसभाबाट सवसाधारण शेयरधनीका तर्फबाट तीन जना सञ्चालक केशव आचार्य, ध्रुव कोइराला र रामचन्द्र सिग्देल निर्वाचित भएका छन् ।
सञ्चालनमा आएको तीन वर्षमा बैङ्कले राजधानीलगायत मुलुकका विभिन्न भागमा गरी १४ शाखा सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
एक वर्षमा निक्षेपको ९८ प्रतिशत लगानी
खाँदवारी डेभलपमेण्ट बैङ्क स्थापनाको पहिलो वर्षै निक्षेपको ९८ प्रतिशत लगानी गर्न सफल भएको छ । सो बैङ्कले २०६६ फागुन २१ गते कारोबार शुरू गरेको हो । स्थापनापछिको १ वर्षमा सो बैङ्कले रू. ३ करोड ५० लाख निक्षेप सङ्कलन गरेकोमा रू. ३ करोड ४३ लाख लगानी गरेको प्रबन्धक बाबुराम तिम्सिनाले अभियानलाई बताए । बैङ्कका ४६ जना संस्थापक शेयरधनी रहेका छन् ।
तिम्सिनाका अनुसार बैङ्कले बचतमा ५ देखि ६ तथा मुद्दतीमा ७ देखि ८ प्रतिशतसम्म ब्याज दिँदै आएको छ । बैङ्कले अहिले व्यापारिक कर्जा, घर कर्जा, सुनचाँदी कर्जा, ओभरड्राफ्ट कर्जा, मोटरसाइकल कर्जालगायत विपन्न वर्गका लागि अन्य विभिन्न कर्जा दिने गरेको पनि बैङ्कले जानकारी दिएको छ । बैङ्कले साना व्यापारीहरूलाई न्यूनतम रू. ५० हजारदेखि रू. ३ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराएको पनि बताएको छ । बैङ्कले पुस ११ गते जिल्लाको तुम्लिङटारमा पहिलो शाखा कार्यालयसमेत स्थापना गरेको छ ।
बीओकेको घरदैलो कार्यक्रम
बैङ्क अफ काठमाण्डू (बीओके) का पूर्वमा रहेका तीन ओटा शाखाले बैङ्कसम्बन्धी जनचेतना जागृत गर्न सार्वजनिक बिदाको दिन घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न थालेका छन् । विराटनगर, इटहरी र उर्लाबारीस्थित बैङ्कका शाखा कार्यालयहरूले समन्वय गरेर पालैपालो ३ ओटै स्थानमा सबै शाखाका कर्मचारी भेला भई जनचेतनामूलक र्याली प्रदर्शन गर्नुका अतिरिक्त घरघरमा गई बैङ्कमा खाता खोल्दा हुने फाइदा र बैङ्कले ल्याएका नयाँ प्रडक्टका विषयमा जानकारी दिने गरेको इटहरी शाखाका ग्राहक सेवाका कर्मचारी ईश्वर खड्काले बताए । उनका अनुसार २ महीनादेखि प्रत्येक साता यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । बीओकेका ती तीन शाखामा कार्यरत कर्मचारीको सङ्ख्या ३० छ ।
रारा बैङ्कको साधारण शेयर बाँडफाँट
रारा विकास बैङ्कले निष्कासन गरेको साधारण शेयरको बाँडफाँट गर्ने कार्य सकिएको छ । ग्रोमोर मर्चेण्ट बैङ्कर लिमिटेडको निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकत्वमा माघ ६ देखि १० गतेसम्म बैङ्कको शेयर सवसाधारणका लागि सार्वजनिक निष्कासन तथा विक्री खुला गरिएको थियो । बैङ्कको रू. १ सय दरका ६ लाख ६० हजार ३ सय ३० कित्ता साधारण शेयरका लागि २० हजार ६ सय ३८ (२९ जना कर्मचारीसमेत) आवेदकबाट २१ लाख २८ हजार २ सय ३० कित्ता साधारण शेयरका लागि दरखास्त प्राप्त भएको थियो । आवेदकमध्येका २० हजार ५ सय १२ (२९ जना कर्मचारीसमेत) जना आवेदकलाई खुला गरिएको सबै साधारण शेयर बाँडफाँट गरिएको बताइएको छ । सार्वजनिक निष्कासनमा ३ गुणाभन्दा बढी शेयरका लागि आवेदन प्राप्त भएको ग्रोमोरका महाप्रबन्धक कवीन्द्रध्वज जोशीले जानकारी दिए । सवसाधारण लगानीकर्ताहरूको सुविधाका लागि बाँडफाँटमा परेका आवेदकहरूको नामावली धितोपत्र निष्कासन तथा विक्री प्रबन्धकको वेबसाइट डब्लूडब्लूडब्लू डट ग्रोमरमर्चेण्ट डट कममा राखिएको ग्रोमोरले जानकारी दिएको छ ।
तेस्रो रिसिङ सांस्कृतिक महोत्सव
तनहुँको दक्षिणी रिसिङ क्षेत्रको सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय सम्पदाको प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले तेस्रो रिसिङ सांस्कृतिक महोत्सव २०६७ आयोजना गरिने भएको छ । ‘नेपाल पर्यटन वर्ष२०११ सफल पारौं, रिसिङलाई पर्यटन क्षेत्र घोषणा गरौं’ भन्ने मूल नाराका साथ फागुन २६ गतेदेखि शुरू हुने सो महोत्सव ३ दिनसम्म चल्नेछ । रिसिङ क्षेत्र ओझेलमा परेकाले महोत्सवको माध्यमबाट उक्त क्षेत्रको पर्यटकीय सम्भाव्यताको प्रवर्द्धन गर्न लागिएको महोत्सव आयोजक समितिका संयोजक गमबहादुर थापाले बताए ।
महोत्सवका क्रममा रिसिङ क्षेत्रअन्तर्गतका रिसिङ रानीपोखरी, कोटदरबार, राम्जाकोटलगायत गाविसबाट देखिने हिमशृङ्खला र महाभारत पर्वतका आकर्षक पहाडका साथै सूर्योदय र सूर्यास्तको दृश्यावलोकनको व्यवस्थासमेत मिलाइएको छ । साथै स्थानीय परिकारको स्वाद र होम स्टेको समेत व्यवस्था गरिएको आयोजक समितिले जानकारी दिएको छ ।
किसान सहकारी चैनपुर आफ्ना भवनमा
साना किसान कृषि सहकारी संस्था चैनपुरमा निर्मित आफ्नै भवनमा सरेको छ । संस्थाको एघारौं वार्षिक साधारणसभाको अवसरमा पूर्व स्थानीय विकास मन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डेले शनिवार सो भवनको उद्घाटन गरेका हुन् । साधारणसभाको अवसरमा सहकारी संस्थाले स्थापना गरेको कफी प्रशोधन उद्योगको पनि उद्घाटन गरिएको छ । सोही कार्यक्रममा मासुजन्य पदार्थ उत्पादनका लागि बाख्रा पालन गर्न चाहने किसानहरूलाई सुलभ दरमा ऋण उपलब्ध गराइएको थियो । ऋण लिएर आयआर्जन गर्न चाहने किसानहरूलाई अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले चेक हस्तान्तरण गरेका थिए ।
पर्वत महोत्सव थप दुई दिन
तेस्रो पर्वत महोत्सवमा थप दुई दिनसम्म सञ्चालन हुने भएको छ । आइतवार सकिने भनिएको महोत्सव मुलुकले राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णयगरेकाले स्थगित गरिएको आर्थिक उपसमितिका संयोजक विषमकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । महोत्सव मङ्लवार सकिने आयोजक समितिले बताएको छ ।
महोत्सवमा शनिवार छैटौं दिनसम्म १ करोडबराबरको कारोबार भएको संयोजक श्रेष्ठले बताए । महोत्सवमा २ करोडको आर्थिक कारोबार गर्ने लक्ष्य आयोजकले लिएका छन् ।
महोत्सव अवलोकन गर्नकै लागि दैनिक बागलुङ, म्याग्दी, कास्की, स्याङ्जालगायत जिल्लादेखि सवसाधरण आउने गरेका छन् ।
सीएमए शिक्षाको तयारी
नेपालमा रहेका लेखा व्यवसायीहरूको अन्तरराष्ट्रिय विज्ञता बढाउने लक्ष्यका साथ डीपी दाहाल एण्ड कम्पनीको आयोजना तथा इन्षिटच्युट अफ सर्टिफाइड म्यानेजमेण्ट एकाउण्टेण्टस् अष्ट्रेलियाको विशेष पहलमा लेखा व्यवसायमा चाहिने उच्च जनशक्ति र यसको अपरिहार्यता सर्टिफाइड म्यानेजमेण्ट एकाउण्टेण्ट (सीएमए) उपाधि विषयक अन्तरक्रिया सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै सीएमए योगेन्द्र क्षत्रीले नेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनमा प्रवेश भई सेवा क्षेत्र खुला उन्मुख भएको अवस्थामा अन्तरराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उच्च दक्ष लेखा व्यवसायीहरूको आवश्यकता बढेको बताए । ५० जना लेखा क्षेत्रका विज्ञहरूको उपस्थिति रहेको सो कार्यक्रममा इन्षिटच्युट अफ सर्टिफाइड म्यानेजमेण्ट एकाउण्टेण्टस् (आईसीएमए)को सम्पर्क कार्यालयसमेत चाडै खोल्न सहभागीहरूले माग गरेका थिए ।
बृहत् विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शनी सम्पन्न
स्याङ्जाको पुतलीबजार नगरपालिका-१ प्रगतिनगरमा आयोजित तीनदिने बृहत् विज्ञान तथा प्रविधि प्रदर्शनी आयोजना आज सम्पन्न भयो । इन्नोभेशन राष्ट्रिय म्यागेजिनको आयोजना तथा ज्योति आवासीय उच्च माविको स्थानीय संयोजनमा सो प्रदर्शनी भएको हो । जिल्लामा यस प्रकारको प्रदर्शनी पहिलोपटक आयोजना भएको हो । प्रदर्शनीमा ब्ल्याक ट्रेशर रोबोट, वेभ क्यामेरा सीसीटीभी, हाइड्रोपावर इलेक्ट्रीसिटी सिष्टम, छाताबाट पानी तताउने, वायु ऊर्जाबाट चलाउन सकिने प्रविधिलगायत ४० ओटा स्टल राखिएका थिए ।